Ciidamo ka goostay Axmed Madoobe oo ku biiray Ciidanka Xoogga dalka ee Gobolka Gedo | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Ciidamo ka goostay Axmed Madoobe oo ku biiray Ciidanka Xoogga dalka ee...
Ciidamo ka goostay Axmed Madoobe oo ku biiray Ciidanka Xoogga dalka ee Gobolka Gedo
Wararka aan ka heleyno gobolka Gedo ayaa sheegaya in ku dhowaad 200-askari oo ka tirsanaa Ciidanka Daraawiishta Jubbaland ay isku dhiibeen Ciidanka Xoogga dalka ee ku sugan degmada Luuq ee Gobolka Gedo.
Ciidankaan isu dhiibay Milateriga Soomaaliya ayaa ku sugnaa degmada Beladxaawo ee gobalka Gedo waxayna toos uga amar qaadan jireen maamulka Amxed Madoobe.
Sidoo kale, wararka ka imaanaya gobalka Gedo ayaa soo sheegaya in saraakiil Itoobiyaan ah ay wadahadal la galeen ciidamadaan lagana dalbaday in ay tagaan Luuq oo ay isu dhiibaan ciidamada Qaranka. Wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in ciidankaan ay hadda ku sugan yihiin xero ku taalo degmada luuq.
Sidoo kale waxaa saacadaha soo socda lagu wadaa in ay magaalada Muqdisho soo gaaraan guddoomiyaasha degmooyinka Luuq, Beladxaawo iyo Doolow ee gobalka Gedo, kuwaas oo toos ugu xirnaa Axmed Madoobe balse hada heshiis la galay dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dooneyso iney kala fur furto mas’uuliyiinta iyo Saraakiisha ciidan ee toos ugu xiran Axmed Madoobe kuwaasi oo ku sugan Gobolka Gedo.